Wararka - Noocyada caadiga ah ee farsamaynta
Waa in ay jiraan aqoon badan oo farsamayn ah oo aadan daruuri ka aqoonin farsamaynta. Machining -ku wuxuu loola jeedaa habka lagu beddelayo cabbirka guud ama wax -qabadka shaqo -qabadka oo leh qalab farsamo. Waxaa jira noocyo badan oo makiinado. Aynu eegno noocyada caadiga ah ee makiinadaha
Soo jeesashada (lathe vertical, sleeper): leexashadu waa ka shaqaynta biraha ka goynta shaqada. In kasta oo goob -shaqeedka uu meerto yahay, aaladdu waxay gooyneysaa goobtii shaqada ama waxay ku soo jeesaneysaa goobta shaqada;
Makiinadda wax lagu shirayo (axdi qarameedka toosan iyo axdi qarameedka toosan): wax -qodistu waa ka shaqaynta jaridda birta oo leh qalab wareegsan. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu farsameeyo jeexjeexyada iyo dusha toosan ee qaabka, sidoo kale waxay ku hawlgeli kartaa sagxadaha arc laba ama saddex faasas;
Caajis: caajisku waa hab wax lagu socodsiiyo si loo ballaadhiyo ama loo sii socodsiiyo godadka la qoday ama lagu tuuray goobta shaqada. Waxaa inta badan loo adeegsadaa mashiinnada godadka leh qaab shaqo oo weyn, dhexroor weyn iyo saxnaan sare.
Qorshaynta: dabeecadda ugu weyn ee qorshaynta waa in la farsameeyo dusha toosan ee qaabka. Guud ahaan, xajmiga dushiisu ma sarreeyo kan mashiinka wax lagu shiido;
Slotting: Afduubku runtii waa qorsheeye toosan. Qalabkeeda goynta ayaa kor iyo hoos u dhaqaaqa. Aad bay ugu habboon tahay farsamaynta arc aan dhammaystirnayn. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu gooyo nooc ka mid ah marsho;
Shiidi (shiidi dusha, shiidi dhululubo, daloolinta godka gudaha, shiidida qalabka, iwm.): Shiidi waa habka wax lagu farsameeyo ee birta lagu jaro giraangirta wax lagu shiido. Qalabka shaqada ee la warshadeeyay wuxuu leeyahay cabbir sax ah iyo dusha siman. Waxaa inta badan loo adeegsadaa dhammaystirka kama dambaysta ah ee shaqooyinka kulaylka lagu daweeyo si loo gaaro cabbir sax ah.
Qodista: qodista waa qodista goob shaqo oo bir ah oo adag oo leh qoditaan Rotary ah; Marka la qodayo, sheyga shaqada ayaa la dhigaa, la hayaa oo la hagaajiyaa; Wareegidda ka sokow, xoogaa daloolinku wuxuu kaloo dhaqdhaqaaq quudinta ka dhigaa dhinaciisa.
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Aluminium CNC Qaybo Machined, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Boolal, Dhimashada Magnesium, Sheet Birta Stamping Products, Guga Saxanka, Dhammaan Alaabta